TRUMP "Waa Bin Salmaan, haddiiba ay jirto cid ka dambaysey dilka Khaashuqji" - Halbeeg News
TRUMP “Waa Bin Salmaan, haddiiba ay jirto cid ka dambaysey dilka Khaashuqji”
in Caalamka, Qormooyin, Soomaaliya, War Degdeg, Xulka
WASHINGTON (HALBEEG) – Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in Dhaxal Sugaha Sucuudiga Muxammad Bin Salmaan uu yahay maskaxdii ka dambaysey falkii lagu khaarijiyey wariye Jamaal Khaashuqji, kaas oo bishan horraanteedii lagu dhex dilay qunsuliyadda Sucuudiga ee Istanbul.
Waraysi uu shalay siiyey wargayska The Wall Street Journal, wuxuu Trump ku sheegay in haddiiba ay jirto cid ku lug leh dilka Khaashuqji uu yahay Dhaxal Sugaha, maadaama uu isagu xilligan yahay midka badi talooyinka Boqortooyada Sucuudigu ka go’aan.
Trump ayaa sidoo kale sheegay in muddadii uu baaritaanku socday uu dhowr jeer la hadlay Bin Salmaan, islamarkaana waydiiyey inuu wax ka ogyahay arrinta Khaashuqji iyo in kale, balse uu mar kasta kala kulmayey jawaabo diidmo ah.
“Su’aashii ugu horraysay ee aan waydiiyey waxay ahayd: Horay ma usii ogayd in dilka Khaashuqji uu ahaa mid qorshaysan? Wuu inkiray wuxuuna iigu jawaabay: Maya.” Trump ayaa sidaas u sheegay wargayska The Wall Street Journal.
Dhinaca kale, Madaxwaynaha Maraykanka Donald Trump ayaa qaabkii Sucuudigu damceen inay arrinta Khaashuqji u qariyaan wuxuu ku tilmaamay ‘isku daygii ugu foosha xumaa’ isagoo intaas raaciyey in qorshaha dilka Khaashuqji uu bilowgiisii horeba ahaa mid khaldan, qaabka laysugu dayey in loo daboolana uu sidoo kale ahaa mid khaldan.
Bishan October 2deedii ayey ahayd markii la waayey Jamal Khashoggi, kaddib markii uu waraaqo guur u doontay qunsuliyadda uu dalkiisu ku leeyahay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Laamaha ammaanka ee Turkiga ayaa durbadiiba shaaciyey in ninkaas lagu dhex dilay qunsuliyadda Sucuudiga ee Istambul, inkastoo Boqortooyada Sucuudigu eedayntaas si weyn isaga fogaysay kuna tilmaantay iskuday la doonayo in wax loogu dhimo sumcaddeeda.
Caddaymo dheeri ah oo soo baxay iyo cadaadis xooggan oo dhinaca Beesha Caalamka uga yimid dartood, Boqortooyada Sucuudigu waxay saddex maalmood kahor qiratay in qunsuliyadda ay ku leedahay magaalada Istanbul lagu dhex dilay wariye Jamaal Khaashuqji, kaddib gacan ka hadal dhex maray isaga qaar kamid ah shaqaalaha qunsuliyadda, warkaas oo dunidu u fahamtay been kale oo Riyaad doonayso inay isaga fogayso ku lug lahaanshaheeda kiiska Khaashuqji.
Mar kale, shalay oo Talaado ahayd, Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Sucuudiga Caadil Al Jubayr ayaa qiray in Khaashuqji si bareer ah loo dialy, haseyeeshee falkaas aanu waxba kala socon Dhaxal Suge Maxamad Bin Salmaan.
Khaashuqji ayaa ahaa wariye ruug caddaa ah kaasoo horay xiriir dhow ula lahaan jiray qoyska Boqortooyada Sucuudiga, balse sannadkii u dambeeyey mucaarad noqday kaddib markii uu kasoo cararay dalkiisa hooyo fariisinna ka dhigtay dalka Maraykanka.
Wargayska The Washington Post iyo bartiisa Twitterka ayuu wax ku qori jiray, wuxuuna si joogto ah u dhaliili jiray siyaasadda Boqortooyada Sucuudiga, gaar ahaan siyaasadda Dhaxal Sugaha Muxammad Bin Salmaan.
Khaashuqji, wuxuu si gaar ah ugu ololayn jiray xorriyatul-qawlka iyo in dadka Sucuudigu u madax bannaanaadaan rabitaankooda siyaasadeed.
Maalinta cudurka Dabaysha oo dunida laga xusayo xilli cudurkaasi Soomaaliya kusii fidayo
Shirkadaha taleefannada oo soo saaraya taleefanno casri ah oo ku shaqeyn doona 5G